Mozika - Mag tsy mampino
Triad - Ny mozika
Tsy mora ny mametraka ny sehatra. Ny mozika dia iray amin'ireo singa fototra amin'ny fametrahana ny votoatin'ny sarimihetsika, lalao video na zavatra hitanao eo amin'ny efijery. Ahoana ny fomba hametrahanao ny sehatra ho an'ny lehilahy iray izay mijaly amin'ny mombamomba azy…
Mpanakana tranokala mozika- Manakana ny tranokalanao mozika ankafizinao ho anao
Ny habetsaky ny angona misy eto amin'ny Internet dia mahavariana ary miparitaka amin'ny fizarana maro samihafa. Tao anatin'ny am-polony taona vitsivitsy, nitombo ny internet ka lasa goavambe tsy azo sakanana izao. Androany, ny lazany dia mitombo amin'ny taha ambony…
Hira Upbeat 5 afaka mametraka anao amin'ny endrika tsara kokoa
Ny mozika dia mpamadika toetr'andro matanjaka satria ny tonony henonao dia misy fiatraikany amin'ny toe-panahinao. Efa nahatsikaritra ve ianao fa ny fihainoana ny dian-tongotra metaly mavesatra loatra dia mamela anao hahatsapa ho somary tezitra na amin'ny fomba ahoana no ahafahan'ny manga manga mamelombelona…
Ahoana no ahafahan'ny feon'ny mozika hahatonga anao ho tsy misy fotony?
Moa ve nisy tantara iray novakinao taloha, na nataonao tafaverina amin'ny laoniny, na hanitra ankasitrahanao? Tsy azo lavina ny fiasan'ny ati-doha amin'ny fomba tsy fantatra, mampatsiahy antsika ny zavatra efa hadinontsika hatrizay. Mila ny…
Gordon Matthew Thomas Sumner - Manindrona
Araka ny voalazan'i Neil Tennant dia mihamangatsiaka ara-pientanam-po ny olona amin'ny taona rehetra lasa malaza. Michael Jackson dia voaozona mandrakizay ho 10 taona, ary i Van Morrison dia tsy hanafoana ilay mpiambina azy ireo tampoka. Saingy i Sting dia efa tsy mahay miteny intsony…
Ahoana ny fomba hahitana kilasy dihy amin'izao fotoana izao any Delhi miaraka amin'ny potsitra totozy vitsivitsy
Ny dihy dia zavakanto mahafinaritra izay manao majika lehibe. Tsy afaka mandihy daholo ny olona. Mila fitiavam-panahy sy fahaiza-manao dihy tena izy. Misy fomba fandihizana an-jatony ampiharina manerana an'izao rehetra izao. Ho an'ny fianarana fomba fandihizana dia tsy maintsy tena tianao ...
Fampisehoana maso ny Jazz ensembles an'i Jazz
Ny fisafidianana ny serivisy ho an'ny tarika mpitendry mozika jazz maro-fitaovana dia nivadika ho nofinofy ho an'ny olona maro izay mikarakara hetsika isan-karazany. Manana fomba maro ny mozika Jazz ary mahay kokoa ireo tarika kely ireo rehefa…
“Fanatanjahan-tena” mampiady hevitra an'i Kylie Minogue
Ny horonantsary mozika farany an'i Kylie Minogue “Sexercise” dia miteraka tabataba be, tsy izy rehetra no tsara. Ity horonantsary ity dia ho an'ny laharana faharoa amin'ny rakikirany farany Kiss Me Once ary ho toy ny horonantsary fampiroboroboana ilay rakikira. Ny tokana voalohany mankany…
Attilio Pascal miresaka momba ny fiaraha-miasa amin'ny mpamokatra Bappi Lahiri
Enga anie 9, 2021 Enga anie 29, 2021
Hatramin'ny niasa tao amin'ny Abbey Road Studios any Londres, hatramin'ny injeniera malaza Red Bus Studios, Attilio Pascal, dia nisy zavatra nampientanentana nitranga tamin'ny asany ka tsy ninoany akory ny tenany! Vao tsy ela akory izay dia niara-niasa tamin'ny talenta…
The Art Of Seduction Industry Edition Ho an'ny mpanakanto rap ho avy Elijah Sommerz
Ny fanontana indostrian'ny Art of Seduction dia nohavaozina: MR Olezhek "Ny zava-kanton'ny famitahana dia tena izy". Iray amin'ireo tambajotra mpahay mozika mahomby ny fahaizanao mitarika ny mpankafy anao, ny dingana voalohany dia ny fidirana ao…